December 19, 2009 by okunikezwayo 7 Amazwana
Ngesikhathi usebenzela izici ezintsha for transposh, siye sakhubeka phezu udaba okuyinto singase silungise. Impikiswano laliwukuthi bots amaningi kuthwetshulwa le sayithi isikeni amakhasi ne parameter “replytocom” okuyinto engenamsebenzi. Ngokusobala – le Ipharamitha engenamsebenzi ebangele kuka 2GB of traffic salokhu sayithi in the last 9 izinyanga.
Sithathe inkululeko ukuze kukhishwe imisho embalwa of code bese udala plugin okuyinto fixes le. Isiyatholakala at the WordPress plugin lwemibhalo.
A bahebeze encane mayelana isayithi WordPress, kusukela ukuvota for plugins kuyinto engaziwa, the plugin kwaba bavotela phansi othile, okuyinto asinayo indlela yokwazi ungubani (noma) kuyinto. Hhayi nanoma iyiphi izizathu esingayenza sicabange (Phela, plugin free, ukuze silungise inkinga ethize, kungekho izinhloso, okuyinto nje usebenza). Uma sizobe abeke izandla zethu phezu kwakhe…. 🙂
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: replytocom, plugin wordpress